Gudoomiye Jawaari oo la kulmay Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Gudoomiye Jawaari oo la kulmay Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Qin Jian, waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada Wadan.
Guddoomiyaha golaha Shacabka Soomaaliya iyo Safiirka ayaa kulankooda inta uu socday ka wada hadlay isku xirka Baarlamaanada Soomaaliya iyo Shiinaha , mashaariicda lagu horumarinayo Golaha Shacabka Soomaaliya iyo arrimo kale sida kulanka ka dib uu warbaahinta Dowladda u sheegay Cabdi kariin Xaaji Cabdi buux oo ah Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Soomaaliya.
Dalalka Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhaxeeya Xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan isugu jira, iyadoo Dowladda Shiinaha ay Soomaaliya ka taageerto waxyaabo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada.
The post Gudoomiye Jawaari oo la kulmay Safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya appeared first on Ilwareed Online.
Falanqeyn: Kala fikir aan dagaal lahay waa horumar siyaasadeed
Midowga Afrika oo Deeq raashin ah ku wareejiyey Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya